Dagaal hubka noocyadiisa kala duwan leysku adeegsaday ayaa maanta ka dhacay Wanlaweyn… – Hagaag.com
Dagaal hubka noocyadiisa kala duwan leysku adeegsaday ayaa maanta ka dhacay Wanlaweyn…
Posted on 22 Maajo 2021 by Admin in National // 0 Comments
Dagaal hubka noocyadiisa kala duwan leysku adeegsaday ayaa maanta ka dhacay Degmada Wanlaweyn ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Dagaalka ayaa u dhaxeeyay ciidan kala taabacsan Guddoomiyaha Degmada, Maxamed Siidow Cabdiraxmaan iyo Guddoomiye Kuxigeenka Arrimaha Bulshada, Axmed Cabdullaahi Cabdi.
Dagaalka oo ka qarxay Warta Daa’uud Buulle ayaa ku fiday xaafadda Muuri, taasoo hakad ku keentay dhaqdhaqaaqii dadka, gaadiidka iyo weliba ganacsigii degmadaasi.
Maxamed Siidow Cabdiraxmaan, Guddoomiyaha Degmada Wanlaweyn ayaa Guddoomiye Kuxigeenkiisa ku eedeeyay in ciidanka taabacsan ay weerareen Daraawiishta Koonfur Galbeed ee fariisimaha ku leh Warta Daa’uud Buulle.
Guddoomiyaha ayaa Warbaahinta u sheegay in markii horeba sifo aan sharci ahayn lagu soo magacaabay Guddoomiye Kuxigeenka, isla-markaana aanu deegaanka kala garanayn, inkastoo sida uu qirayba uu deegaan ahaan u dhashay.
Taliyaha Saldhigga Booliska ee Degmada Wanlaweyn, Cabdalla Boorow Xasan ayaa Guddoomiyaha iyo Guddoomiye Kuxigeenka ugu baaqay inay si deg-deg ahi dagaalka u joojiyaan, haddii kalena ay tallaabo ka qaadi doonaan, sida uu yiri.
Illaa iyo hadda inta la xaqiijiyay waxaa dagaalka ku dhintay saddex ka mid ah dhinacyadii uu u dhaxeeyay.